कोरोना बाट विदेशमा १४ नेपालीको निधन, ६६५ मा सङ्क्रमण पुष्टि – Online Nepal
कोरोना बाट विदेशमा १४ नेपालीको निधन, ६६५ मा सङ्क्रमण पुष्टि
April 12, 2020 310
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रहेका १४ नेपालीले ज्या-न गुमाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट बेलायतमा आठ, अमेरिकामा पाँच र संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक जना नेपालीको ज्या-न गएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । समितिका संयोजक डा सञ्जीव सापकोटाका अनुसार हालसम्म विभिन्न मुलुकमा रहेका ६६५ गैरआवासीय नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोग, गैरआवासीय नेपाली सङ्घको शाखा तथा स्थानीय सङ्घसंस्थाद्वारा सङ्कलित सूचनाका आधारमा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
Prevअमेरिकामा २० हजार भन्दा बढीको निधन भएपछि, ट्रंपले अहिलेसम्मकै ठूलो निर्णय लिंदै !
Nextचीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी–‘४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62073)